Anitta Sawirro Qaawan & Muuqaalo Iyo Cajalado Muuqaal Wasmo Ah - Anitta
Anitta Sawirro Qaawan & Muuqaalo Iyo Cajalado Muuqaal Wasmo Ah
Fiiri aruurinta kama dambaysta ah ee heesaaga reer Brazil iyo fanaanka Anitta oo qaawan iyo sawiro dameer kulul, cilladaha labiska ee ay wadato, sida isqabashada naasaha iyo gogosha ay ku leedahay masraxa, iyo fiidiyowga qaawan ee Anitta cajaladeeda galmada xaday! Waxay sakhraansaneyd iyadoo boodhka siinaya nin aan lagaran oo gaariga saaran. Maxay tahay haweeney cajiib ah oo leh jir la yaab leh!
Anitta waa 27 jir reer Brazil ah oo qoob-ka-cayaar, heesaa, TV-ga iyo atariishada. Sannadkii 2010-kii, waxay la saxeexatay qandaraas ay la gashay sumadda. Anitta waxay heshay sumcad qaran waxayna gaadhay meesha ugu sareysa shaxda Brasil Hot 100 Airplay. Markii ay Anitta soo saartay albumkeedii labaad, waxay iyaduna soo saartay albumkeedii ugu horreeyay ee toos ah. Bishii Nofeembar 2014, da'da 21, waxay ku soo bandhigtay goobta Abaalmarinta Grammy Latin . Taasi waxay ka dhigtay iyada fanaankii ugu da'da yaraa ee reer Brazil ee heesaa inay ka soo muuqato abaalmarinta. Sannadkii 2017, waxaa lagu qiimeeyay mid ka mid ah dadka caanka ah ee ugu saameynta badan baraha bulshada sida lagu sheegay majaladda Billboard. Hadda waa fanaanad caan ka ah adduunka oo kulligeen waan jecel nahay xirfadaheeda twerking, waxay caan ku tahay!
Kadib sanadaha soo socda, Anitta waxay la shaqeysay fanaaniin waa weyn oo Latin America ah sida Ozuna, Maluma, J Balvin iyo kuwa kaloo badan. Waxyaabihii aan ka jeclaan jirnay iyo bandhigyadii galmo ayaa la jiray heesaaga Natti Natasha, oo ah sawirro qaawan oo xaday iyo cajalad galmo !
fiidiyowga galmada ee Anitta blowjob cajalad jinsi ah
Waa tan fadeexadii ugu weyneyd ee dhacday 2020 ilaa hadda! Xiddiga reer Brazil Anitta oo muuqaal qaawan oo muuqaal ah ka duubay iyada iCloud, waana cajalad galmo! Dhawaan waxay tiri wax lamid ah 'Waxaan marwalba sameeyaa waxa aan jeclahay, oo waxaan ku raaxeysanayaa daqiiqad kasta oo noloshayda ah', waxaan u malaynaynaa in mid ka mid ah waxyaabaha ay ugu jeceshahay ay tahay inay ku nuugto gaariga nambarka waqtiga firaaqada. Waxaan u maleynayaa inay tani dhacday ka dib mid ka mid ah bandhigyadii ay dhowaan ku qabatay Ameerika. Waxay leedahay qurxiyo sidoo kale way sakhraansan tahay… Anitta ayaa la arkaa iyada oo ninkeeda siinaysa dharbaaxo gaabis ah, dhuuqida ciyinkiisa, kubbadaha isla markaana ka dhigaya dhamaan isaga qoyan! Anitta ma qaawan, laakiin xaqiiqdaas jirta, waxaan maqli karnaa taaheeda oo naga dhigaysa mid adag!
Anitta sawiro qaawan & toppless
Curvy Anitta waa Latina waana wada ognahay taas. Iyadu ma aha nudes badan, laakiin waxaan soo ururinay sawiro aad gabi ahaanba jeclaan doonaa. Anitta waxaa lagu arkaa wax yar oo qaawan, oo dusha laga daboolay, oo ku lebisan dhar kulul, waxayna muujineysaa dameerkeeda timo. Kadib waxaan haynaa sawiro qaawan oo Anitta ah oo laga duubay duubitaankeedii ugu dambeeyay ee fiidiyowga muusikada Vai Embrazando (MC Zaac)! Aad ayey ugu kulushahay 27 sano jir kale oo caan ah! Anitta waxay ka timid Baraasiil dhamaan dadka jecel muusikada Latin-ka way garanayaan iyada iyo jerk dameerkan weyn ee twerking! Hot Anitta waxay ka muuqaneysaa fiidiyowgaan iyada oo dharkeeda ay qaawan tahay, laakiin ibta waxaa lagu daboolay wareegyo!
Waa kuwan fiidiyowga xiisaha leh ee Anitta ku dhowaad dameer qaawan twerking iyo qoob-ka-ururinta:
Siidjiid Anitta nip iyo go 'shaati ah
Sexy Anitta waxay qaawanayd dhowr jeer dadweynaha dhexdiisa. Way qoob-ka-ciyaaraysay oo sameysay sawirro badan intii ay ku guda jirtay, sidaa darteed ibtaheeda iyo surwaaldeeda marwalba way ka baxsanaayeen kantaroolkeeda. Yaa jecel gabdhaha wax walba xukuma? Ma yeelayno! Intooda badan kuwa jilicsan ee aan xakameynin rajabeetada iyo dharka hoosta ayaa ah kuwa caanka ah ee ugu caansan!
Hortaada waxaa ku yaal sawirro lagu qaaday Rio De Janeiro, markii fannaanka caanka ah ee Anitta uu ka ciyaarayay Abaalmarinta Muusikada! Xanuunkii ibta ee Anitta ayaa dhacay dadkii dhagaystayaasha ahaana way wada maaweelinayeen xalay oo dhan! Waxaan marwalba fileynaa in waxoogaa khaldan oo dharka ka mid ah ay masruufka ka muuqato marxaladda, laakiin markan taranka Anitta ayaa si cad u doonayay midkayaga beige oo aad u xun, areolas-keedu wuu feejignaadaa markasta!
Anitta bikini & cagaha sexy
Halkan waxaa ku yaal aruurinta naasaha dabiiciga ah ee Anitta, dameer weyn, iyo sawir cabbirkoodu aad u fiican yahay! Hagaag, si kastaba ha noqotee, intaas oo dhan waxaan ku haynaa Anitta, in kasta oo ay xaqiiq tahay inay qurux badan tahay oo ay leedahay rafcaan jinsi oo seddex haween ah. Waxay runtii jeceshahay inay muujiso muuqaalkeeda bikini, dameer qaabeysan oo qalooca, sidoo kale boogaha dabiiciga ah iyo cagaha qaawan! Ku raaxayso!
Iyo Ogosto 2020, Anitta oo sexy ah ayaa lagu arkay Portofino iyada iyo asxaabteeda. Waxay xidhatay bikinimo shabeel daabacay iyo waliba isla surwaal gaagaaban iyo boorsada… Xitaa muraayadaha indhaha ayaa la daabacay. Waa maxay nasiib Waa maxay sababta Latinaskani ay u leeyihiin dhar aad u karaahiyo leh xagaagan? Waxaan diirada saari doonaa Anitta dameerkiisa iyo bowdadiisa weyn… Way ka baxeen dunidan!
qaawan Taylor dameer dheereeya
Courtney stodden qaawan tumblr
abigale almonds cajalad galmo
tianna Gregory xiisaha kulul